ခရစ်ယာန်တွေဟာအစဉ်အဆက်ထက်ပိုပြီးနှိပ် | Apg29
အနည်းဆုံး 245 သန်းရစျယာနျအထဲတွင်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်ပါတယ် 50 နိုင်ငံများတွင်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေကြသည်။
အဖိနှိပ်ခံခရစ်ယာန်များ၏ပွင့်လင်းတံခါးပေါက် '' နှစ်စဉ်ကမ္ဘာ့စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့စာရင်း 2019 ကာလအစဉ်အမြဲအဆိုးဆုံးတစ်နှစ်ကြောင်းပြသထားတယ်။ ဒါဟာဝေးအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည် အခက်ခဲဆုံးတစ်နှစ် မှတ်တမ်းများစတင်ကတည်းက။
2003 ကတည်းကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုအတွက်အကြီးမြတ်ဆုံးခဲ့ မြောက်ကိုရီးယား။ မြောက်ကိုရီးယားအတွက်ကြောင့်အဓိကအားနောက်ကွယ်မှပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးခရစ်ယာန်များ၏ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုမှမောင်းတယ်။ မျိုးဆက်သုံးဆက်အဘို့, တိုင်းပြည်အတွင်းရှိသမျှသောအာရုံ, အကင်မိသားစုကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်အားဂုဏ်ပြုအပေါ်ဖူးပွင့်လင်းတံခါးပေါက်ရေးသားခဲ့သည်သိရသည်။
ဒါဟာ 200,000 နှင့် 400,000 အကြားရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းနေပါတယ် မြောက်ကိုရီးယားခရစ်ယာန်တွေ , သူတို့များစွာကိုအလုပ်သမားစခန်းများတွင်ထားနေကြသည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ, လုနီးပါးအဖြစ်မကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သောကြောင့် အာဖဂန် ကနိုင်ငံခြားအဖြစ်တခြားဘာသာတရားကိုတှေ့မွငျထားတဲ့အစ္စလာမ္မစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။
အာဏာပိုင်များနှင့်တာဝန်ရှိသူများခရစ်ယာန်ဘာသာ၏မည်သည့်ပုံစံနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ကြသည်။ အဆွေအမျိုး, တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများ, ဒေသခံဗလီများနှင့်ပင်အများပြည်သူခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်း၏မည်သည့်နိမိတ်လက္ခဏာနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါသည်၏တောင်မှခေါင်းဆောင်များ, ပွင့်လင်းတံခါးပေါက်ရေးသားခဲ့သည်။
ဒါဟာဆွီဒင်အာဖဂန်နစ္စတန်ထဲကနေကြီးမားတဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှိကြောင်းသတိပြုရကျိုးနပ်သည်။ 2015 ထိုအရပ်မှခိုလှုံခွင့်တောင်းခံ၏ 25 ရာခိုင်နှုန်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
ယခုနှစ်တွင်ပင် ရုရှားက အထူးသဖြင့်ပျော်စရာစာရင်းထဲတွင်ဆောင်ခဲ့လေ၏။ တိုင်းပြည်စာရင်းတွင်ပေါ်ရာဌာန၌ 50 41 ဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်တွေဟာရုရှားမှာကိုညှဉျးဆဲကြသောအခါ, ဒီမကြာခဏမွတ်စလင်အခင်းအကျင်းအတွက်ဖြစ်ပျက်, ပွင့်လင်းတံခါးပေါက်က၎င်း၏ website တွင်ရေးသားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ပို. ပို. တင်းကျပ်သည့်ဥပဒေများ၏နိဒါန်းတဆင့်အထူးသဖြင့်အစိုးရအရာရှိများအားဖြင့်ဖိအားပေးခရစ်ယာန်, ဖိ။ အဆိုပါ Orthodox ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းပိုင်ပါဘူးသူနှစ်ရာခိုင်နှုန်းဆန့်ကျင်နေတဲ့ပြင်းထန်တဲ့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုရှိပါသည်။
ဥပမာတစ်ခုဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှုများအသစ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအခြားအရာများအနက် 2018. အတွက်အင်အားသုံးသို့ကြွတော်မူရာအရပ်, တရုတ်, ဖြစ်ပါသည်, အသင်းတော်ဝင်မှအသက် 18 နှစ်အောက်မည်သူမဆိုတားမြစ်တံခါးနားမှာအရိပ်လက္ခဏာကိုတက်ထားကြရတယ်။
အမျိုးသားရေးသစ္စာရှိမှုဘာသာတရားနဲ့ဆက်စပ်ဘယ်မှာအခြားနိုင်ငံများတွင်တွေ့မြင် Ultra-အမျိုးသားရေးလမ်းကြောင်းသစ်။ ခရစ်ယာန်လူနည်းစုသစ္စာဖောက်အဖြစ်ရှုမြင်ခြင်းနှင့်ဥပမာအစိုးရကအနေနဲ့အစွန်းရောက်ဟိန္ဒူရူပါရုံကိုအားပေးအားမြှောက်ရှိရာအိန္ဒိယ, ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်အဖြစ်, သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ခွာရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေသည်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဖွင့်ပါတံခါးပေါက်အစီရင်ခံစာ, ဖြန့်ချိ ကမ္ဘာ့ဖလားစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့စာရင်း ရာ 50 နိုင်ငံများစာရင်းပြုစု ခရစ်ယာန်များ၏ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုအဆိုးဝါးဆုံးသည်အဘယ်မှာရှိ။
ကမ္ဘာ့ဖလားစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့စာရင်း Download Open ကိုတံခါးပေါက်ကနေတိုက်ရိုက်ဤနေရာတွင်